एक पछि अर्को ठाउमा नेकपाको पत्ता साफ हुदै ! - समृद्ध नेपाल
एक पछि अर्को ठाउमा नेकपाको पत्ता साफ हुदै !
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको गृहजिल्लामा लोकतान्त्रिक समूहले कब्जा जमाएको छ । बिर्तामोड साना शहरी खानेपानीको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहको प्यानलै विजयी भएको हो । लोकतान्त्रिकतर्फबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार जलकुमार गुरुङ ८सय ५०मतको अन्तरले विजयी भएका हुन् गुरुङले १हजार ७सय ४मत प्राप्त गर्दा संयुक्त प्रगतीशिल प्यानलर्तफका अध्यक्षका उम्मेद्वार ज्ञानुराम प्रसाईले ९सय २०मत प्राप्त गरेका छन् ।
उपाध्यक्षमा पर्शुराम सिटौलाले १हजार ६सय ३७मत प्राप्त गर्दा बुद्धिप्रसाद घिमिरेले ९सय १८मत ल्याए । सचिवमा मेघराज बास्तोलाले १ हजार ७सय ३८मत प्राप्त गर्दा जनबहादुर जवेगुले ८सय ३८ल्याए । कोषाध्यक्षमा सारदा रिजालले १हजार ५सय १०मत ल्याउँदा कमलप्रसाद पौडेलले १ हजार सय ४७ मत प्राप्त गरे खुल्ला सदस्यतर्फ देवेन्द्र सिटौलाले १हजार ६सय ६७मत र पारसमणी मैनालीले १हजार ५सय ९४मत ल्याउँदा संयुक्त प्रगतीशिल प्यानलका शंकरराज ढुङ्गेले ८सय ९०मत रश्रिप्रसाद सिटौलाले ८सय ९३मत प्राप्त गरेका छन् ।
महिला सदस्यतर्फ लोकतान्त्रिक समूह तर्फबाट माया प्रधान खड्गीले १हजार ६सय २०सितादवी काफ्लेले १हजार ५सय ७९र बालादेबी खरेलले १हजार ५सय ८७मत ल्याउँदै विजयी भएका छन् । संयुक्त प्रगतीशिल तर्फका सिता सापकोटा पौडेलले ९सय ५०बिनिता कुमारी राजवंशीले ९सय २२र हिमादेबी प्रसाईले ९सय ५२मत प्राप्त गरेकी थिइन् कुल मत २हजार ८सय १गणना हुँदा १२८मत बदर भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । नेकपाको दुई तिहाईको सरकार भए पनि विभिन्न निकटस्थ निर्वाचनमा भने हार खाँदै आएको छ हाम्रोकुरा ।
अचानक बाँदरको मृत्यु भएपछि गाउँनै शोकमा डुब्यो, हिन्दु परम्परा अनुसार गरियो अन्त्येष्टी !
आमालाई भावुक चिठ्ठी लेखेर १६ वर्षे किशाेर बेपत्ता कारण यस्तो !
डिआइजी निर्देशन सातामा एकदिन सिपाही-हवल्दारको ब्यारेकमा सुत्न र हरेक साँझ सँगै खान !
विप्लवले फर्काइदिए सुरक्षाकर्मीभन्छनजनता मेरो साथमा छन् मलाई किन चाहियो सुरक्षा !
प्रचण्डले दुबईमा ४१ अर्ब रकम लुकाएको खुलासाको भिडियो भाइरल !
दुर्गामायाले हास्दै भनिन् बुढालाई बंगुर खसी पार्न सिकाएँ र बिदेस न पठाई नेपालमा नै जागिर दिए !
आज क्रिसमस डे मनाउन रिसोर्ट गएका एकै परिवारको डुबेर मृत्यु !
श्रीमती परपुरुषसँग गएपछि ! बिदेसमा भएको श्रीमानले गरे यस्तो !
यस्ता छन् बायाँ तर्फ ढल्केर सुत्नुका फाइदा !
एप्पलले भन्यो आइफोन-१२ धेरै सम्हालेर चलाइरहन पर्दैन !
उमेर नपुग्दै मानिस बुढो हुने ५ कारण !
आज कालिञ्चोकमा हिउँ परे पछि यस्तो रहयो ! घुम्न जाने होकी ?